यो हो आलियालाई सबैभन्दा मनपर्ने सेक्स पोजिशन - Enepalese.com
यो हो आलियालाई सबैभन्दा मनपर्ने सेक्स पोजिशन
इनेप्लिज २०७३ माघ १६ गते १८:०६ मा प्रकाशित
मुम्बई । बलिउडकी क्युट गर्ल आलिया भट्टले आफ्नो जीवनमा केही निजी कुराहरु सार्वजनिक गरेकी छन् । जसमा उनले आफूलाई मनपर्ने सेक्स पोजिशन समेत खुलाएकी छन् ।
‘वोग’ म्यागजिनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले आफ्नो बेडरुमको सिक्रेट रिवील गरेकी छन् । र, यो म्यागजिनको कभर पेजमा आउनेछ ।
आलियाले अन्तर्वार्तामा आफ्नो सेक्स लाइफबारे खुलेरै कुरा गरेकी छन् । आलियाले आफ्नो सेक्स पोजिशन ‘क्लासिक मिशिनरी’ भएको बताइन् । जब आलियालाई सोधियो कि उनी शारीरिक सम्बन्ध बनाउने समयमा कुन पोजिशनमा रहन मन पराउँछिन् ? उनले भनिन्– ‘मेरो फेवरेट पोजिशन हो क्लासिक मिशनरी! र यो पोजिशनमा मलाई निकै आनन्द मिल्छ । उनले आफू एक आम युवती भएकाले यो पोजिशन राम्रो लाग्ने गरेको उनले बताइन् ।
के तपाई आफ्नो ब्वाईफ्रेण्डको फोन चेक गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा आलियाले भनिन्- मलाई ब्वाईफ्रेण्डको फोनको पासवर्ड पनि थाहा छ ।
आलियाले अन्तर्वार्तामा पुरुषहरुका बारेमा पनि खुलेरै बोलेकी छन् । ‘पृथ्वीमा यदि एक ५० वर्षको पुरुष र एक १८ वर्षको टीनेजर युवक बच्छ भने म ५० वर्षको पुरुषलाई नै चुन्नेछु किनकि म त्यो टीनेजरसँग बस्न सक्दिन्,’ आलियाले भनिन् । यसको कारणमा उनले टीनेजरसँग आफ्नो सम्बन्ध टिक्नै नसक्ने बताइन् ।